Horyaalka Premeir League:- Kulanka Kooxaha Manchester City Iyo Tottenham. | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Kulanka ugu adag usbuucan horyaalka Premeir League ayaa waxa caawa fiidka uu dhex mari doonaa Tottenham oo garoonkeeda joogta, isla markaana uu hoggaaminayo Jose Mourinho iyo Manchester City oo uu gadhwadeen u yahay Pep Guardiola.
Kooxda Jose Mourinho oo kaalinta lixaad ku jirta ayaa waxay shan dhibcood oo nadiif ah ka dambaysaa Chelsea oo afraad fadhida, waxaana u muuqata in ay haysato fursad ay kusoo gaabin karaan farqiga dhibcaha booska afraad, iyagoo ka sare mari doona Manchester United iyo Sheffield United haddii ay guul ka keenaan kulankooda maanta, taas oo ka caawin doonta inay soo fadhiistaan booska shanaad.
Joe Mourinho oo shaqada ka beddelay Mauricio Pochettino waxa uu ku bilowday waayihiisa Spurs saddex guulood oo xidhiidh ah dhamaadka sannadkii hore, laakiin kulamadii u dambeeyey ayay dafirtay, waxaana uu guul la’aan ahaa afartii ciyaarood ee u dhexeeyey December 28 illaa January 18, ka hor intii aaanu ciyaartii Norwich City ee January 22 kusoo laabanin jidka guusha.
Dhibaatada ugu weyn waxay heshay Spurs markii uu ka dhaawacmay dhaliye Harry Kane oo waqti badan sii maqnaan doona, hase yeeshee saxeexyo boosas kale ah ayuu Jose Mourinho sameeyey maalintii ugu dambaysay suuqa iibka.
Tartanka FA Cup wareeggiisa Afraad ayay Spurs si xarrago leh uga soo gudubtay, waxaanay February 16 ballansan yihiin Aston Villa, laakiin waxa uga muhiimsan inay xaqiijisato inay ka qayb-gasho tartamada Yurub oo ay booska shanaad ama afraad soo cidhiidhsato.
Dhinaca kooxda martida ah ee Manchester City, waxay u baahan tahay inay soo yaraysto farqiga dhibcaha kaalinta koowaad ay Liverpool kaga hayso oo 22 dhibcood, laakiin wax rajo ah kama qabaan in ay horyaalka ku guuleystaan, waxa kaliya ee ay eryanayaanna waa in ay xajisato booska labaad, sidoo kalena ay kooxda tababare Klopp ka hor joogsato in ay rikoodh waalli ah oo aan horyaalka ku qaaddo.
City oo Arbacadii guul-darro 1-0 ah kala kulantay Manchester United waxay farqiga goolasha labadii kulan ugu soo baxday finalka Carabao Cup oo ay Aston Villa wada ciyaari doonaan.
Tartanka kale ee FA Cup ayay Manchester City awoodda saaraysaa oo ay usoo gudubtay wareeggiisa shanaad, sidoo kalena Champions League oo ah hammiga ugu weyn ee Pep Guardiola ayaa waxay bishan February badhtamaheeda la ciyaari doontaa Real Madrid.
Marka la eego natiijooyinka lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey ay koox walba ka keentay Premier League, Tottenham waxay soo heshay laba guulood oo kaliya, laba jeer oo barbarro ah iyo laba laga badiyey, waxaana aad uga duwan Manchester City oo afar guulood, hal barbarro ah iyo mid laga badiyey soo diiwaangashatay.
Totgenham wax aka maqan weeraryahanaka Harry Kane, khadka dhexe ee Moussa Sissoko iyo Ben Davies oo dhaawac ah, laakiin waxa taam ah oo afka hore hoggaamin doona Son iyo Lucas Moura oo garab ka heli doona Delle Ali, Ndombele iyo laacibiinta kale ee Spurs.
Dhinaca Man City, waxa aan wali usoo laabanin Leroy Sane, laakiin Jimcihii ayuu Pep Guardiola xaqiijiyey in Laporte, Fernandinho iyo Mendy ay diyaar u yihiin ciyaartan.